PC ကွန်ပျူတာ / Windows အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို Download & Install လုပ်နည်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » PC ကွန်ပျူတာ / Windows အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို Download & Install လုပ်နည်း
PC ကွန်ပျူတာ / Windows ကို APK ကိုများအတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို Download & Install လုပ်နည်း
ဤတွင်ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့ကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မည် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို Pro ကို PC အတွက်။ ဒီလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, သငျသညျ PC အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုလိုလားသူ download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိရပါလိမ့်မယ်။ Kika Keyboard ကို Tech မှအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာကအသုံးပြု, PC ကိုပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်ရဲ့ MAC Desktop ပေါ်မှာ Kika Keyboard ကို App ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းလိုက်နာပါ။
အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများနဲ့ Apple ဖုန်းများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းကိုတစ်ဦးကအစဉ်အလာဖယ်ရှားရာမှာကီးဘုတ်အများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ကရုပ်ပြောင်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြမှကြွလာသောအခါပထမ, အီမိုဂျီ၏နံပါတ်အရှင်ရွေးချယ်စရာနည်းအမျိုးမျိုးနိမ့်သည်။ ဒါဟာခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အသုံးပြုသူများ၏ပြောဆိုမှုများအများစုရိုးရာစကားလုံးများကိုနှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးရုပ်ပြောင်ရှိသည်အနေနဲ့ချဲ့ကားမဟုတ်ဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကိုရုပ်ပြောင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ crazily ဖြစ်ကြပြီးသူတို့မရှိဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်မနိုင်လျှင်, ဒီ app တစ်ခု-ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်စသည်တို့ကိုပြုံးတတ်၏, အီမိုဂျီပျော်စရာချစ်စရာ, ကြောက်မက်ဘွယ် ဖြစ်. , ဆိုလို။ သင်တစ်ဦးပေါ့ပေါ့ရုပ်ပြောင်အသုံးပြုသူတွေဟာရင်တောင်တစ်ဦးရုပ်ပြောင်ရွေးချယ်ရာတွင်စဉ်ကရွေးချယ်စရာတန်ချိန်ပေးထားပါတယ်။ 3000 ရုပ်ပြောင်, GIF များ, စတစ်ကာများနှင့်ရောင်စုံ themes များထက်ပိုတဲ့စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူ။ အခါသင်ရုပ်ပြောင်၏ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်စုစည်းသိသာထင်ရှားတဲ့, သင်ချင်ရုပ်ပြောင်ကိုရှာဖွေမှတဆင့် sort ဖို့တကယ်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤ Keeping, Kika ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်ရုပ်ပြောင်တစ်ခုမရေမတွက်နိုင်တဲ့အရေအတွက်ကတဆင့်မှလျင်မြန်စွာမျိုးရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်ပေးထားပါတယ်။
အနည်းငယ်ပိုပြီး Kika အီမိုဂျီ Keybaord အင်္ဂါရပ်များ
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင့်ရုပ်ပြောင်ချစ်သူများ့ app တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး, Kika အားဖြင့် Keyboard ကို၎င်းစွယ်စုံကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ် add-on ကိုထောက်ပံ့ပေးသောအဲဒီမှာအထဲက apps နှင့် plugin ကိုကီးဘုတ်နဲ့အီမိုဂျီ app များကို အသုံးပြု. လက်ဝါးကပ်တိုင်လိုက်ဖက်တဲ့စဉ်ကြီးမားသောပြဿနာ support.The ။ သူတို့ကမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့တူညီတဲ့ app မရှိပါကြောင့်ရုပ်ပြောင်သို့မဟုတ်သင်တို့ကိုစေလွှတ်တဲ့ဇာတ်ကောင်တူညီသောလမ်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါ။
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကိုယူနီကုဒ်7နှင့် 8 ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာကို tackles, Whatsapp နှင့် iOS ချောမွေ့စွာရုပ်ပြောင်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံရရှိရန်အခြားဘက်မှာအသုံးပြုသူအားဖွင့် emojis ။ Kika Keyboard ကို App ကိုလည်းအသံမြည်ခြင်း, တိကျအော်တိုပြင်နှင့်စကားလုံးအကြံပြုချက်များအားဖြင့်စာရိုက်, ထိုကဲ့သို့သောပွတ်ဆွဲ-up, စာရိုက်အဖြစ်အပေါငျးတို့သအဆင့်မြင့်ခေတ်မီကီးဘုတ်စာရိုက် features တွေပါဝင်သည်။
ဝမ်းနည်းစရာ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကိုအဆိုပါ PC ကိုဗားရှင်းအတွက်မရရှိနိုင်။ ဒါပေမယ့်စမတ်လှည့်ကွက်သုံးပြီးကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းအတွက် Kika အီမိုဂျီနှင့် Keyboard ကို App ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကို PC အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ခုက Android emulator ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်းတစ်ဦးကအကြီးအရာဤနည်းလမ်း Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုလျှောက်လွှာကို PC မှာ Windows 10 / 8 /7/ Vista / XP မှာကိုလည်းရဲ့ MAC OS ဗားရှင်းအတွက်ပံ့ပိုးသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
BlueStacks သုံးပြီး PC အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လုပ်နည်း
ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ PC ကို desktop သို့မဟုတ် laptop ထဲမှာ installed တစ်ခုက Android emulator ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောက Android emulator တဦးရဲ့အဖြစ်ကျနော်တို့ BlueStacks အကြံပြုပါသည်။ သငျသညျသေးကရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အခမဲ့ download လုပ်ပါမှ BlueStacks တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ။
အဖြစ်မကြာမီ BlueStacks ကို download ပြီးပြည့်စုံသည်အတိုင်း, BlueStacks ကိုစတင် install လုပ်ဖို့ installer ကို run ။
သင်မည်သည့်ရွေးချယ်စရာစိတ်ကြိုက်ချင်လျှင်, အသငျသညျလညျးများအတွက် option ကိုရပါလိမ့်မယ်, လိုအပ်သောရာ၌ "Next" ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ရှေ့ဆက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
အောင်မြင်သောဒေါင်းလုပ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံရိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ "ဖြည့်" ဖေါ်ပြခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
BlueStacks ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာပင်မမျက်နှာပြင်အတွက်လက်ဆောင် "BlueStacks" ဖြတ်လမ်းအပေါ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုက Android emulator ကို အသုံးပြု. သင်သည်ထိရောက်စွာအနေနဲ့ Android ဖုန်းကို အသုံးပြု. နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်, ကတည်းက, သင်သည်သင်၏ဂျီမေးလ်သို့မဟုတ် Google အကောင့်နဲ့ကို log in ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, သင့် BlueStacks အိမ်မှာ screen ပေါ်မှာ, သင် "Store မှာ Play" icon လေးမြင်နိုင်ပါသည်။ Google က Play Store အားဖွင့်လှစ်ပါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Kika Keyboard ကို Tech မှအားဖြင့်ဆိုပါက၎င်း၏တရားဝင် app ကိုစစျဆေး, ပထမဦးဆုံး link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကို" ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ရှာပါ။
ဒေါင်းလုတ်ဆွဲစတင် button ကို "Install" ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ။ ခဏတစ်ပြီးနောက်, ဒေါင်းလုပ်လုပ် app ကိုအလိုအလျှောက် install လုပ်ပြီးသားပေါ့။ သငျသညျအထကျပါအချက်များကိုအများစုသင်သည်သင်၏ "အန်းဒရွိုက် Play စတိုး" ပေါ်တွင်လုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်အရာကိုမှအလားတူဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ကဲဒါဆိုရင်တော့ BlueStacks ၏အိမျ screen ပေါ်မှာ, သင်သည်သင်၏ installed apps များတွေ့နိုင်ပါသည်, သင်သည် "Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို" App ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကစတင်သုံးစွဲဖို့ပေါ်မှာထိပုတ်ပါ။
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကို APK ဖိုင်သုံးပြီး PC အတွက် Download:
နောက်တဖန် APK ကိုဖိုင်များကိုသင့်ရဲ့ PC မှာ Windows သို့မဟုတ်ရဲ့ MAC ကထောက်ခံကြသည်မဟုတ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ Kika Keyboard ကို App ကို APK ဖိုင်အားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် BlueStacks ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချက်ဘ်ဆိုက်ကနေ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကို APK ဖိုင် Download လုပ်နှင့်သင့် PC ကို၌ကကယ်တင်
သင့်ရဲ့ယခင်က file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူများထံမှ APK ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထည့်သွင်းဖို့ Install လုပ်ရတဲ့ apps များအနားမှာသုံးစက်သင်္ကေတပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါကြောင့် BlueStacks ဆော့ဖျဝဲမှတဆင့် install လုပ်ထားရရန်အဘို့အစောင့်ပါ။
သငျသညျအသစ်ဒေါင်းလုပ်လုပ် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကိုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာ BlueStacks home page ကိုသွားပါ။
သင်အကြိုက်ဆုံးအီမိုဂျီနှင့် Keyboard ကို App ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့က၎င်း၏ icon ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ။
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို app ကို crashing နှင့်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်
သငျသညျလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်လျှင် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို app ကိုသူ့ဟာသူ crasj မပြုစေခြင်းငှါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ BlueStacks ကနေတစ်ဆင့်အသုံးပြုနေကြတယ်, ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှ BlueStacks ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက crashing နှင့်ဖြင့် Kika ကီးဘုတ် App ကိုဖြစ်ပါတယ်။
BlueStacks လူကြိုက်အများဆုံးက Android emulator ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင် BlueStacks အလုပ်အရင်းအမြစ်များအများကြီးတက်ကြာပါသည်။ သင့်ရဲ့ PC မှာ RAM ကို BlueStacks ကိုထောကျပံ့ဖို့မလုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ BlueStacks ကစားသမားအနေဖြင့်နောက်တဖန် uninstall လုပ်လုပ်ပြီး install ကြိုးစားနိုင်ပါ။ သငျသညျ BlueStacks နှင့်အတူမသွားနိုင်လျှင်ကျနော်တို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းရှိသည်အဖြစ်ဤအမှုကိစ္စနှင့်အခြားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။
BlueStacks မပါဘဲ Kika Keyboard ကိုရုပ်ပြောင် App ကို Download လုပ်ပြီး Install:
BlueStacks မရှိဘဲ Kika Keyboard ကိုရုပ်ပြောင် App ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း Nox, အလားတူက Android emulator ကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်။ Nox လူကြိုက်များသော BlueStacks တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဂိမ်းကစားနှင့်သုံးစွဲသူများအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
PC ပေါ်မှာ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို install ဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ:
Nox တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်နှင့် Nox ကစားသမားကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြည့်စွက်။
Nox ကစားသမားဖွင့်လှစ်ရန်သင့် PC မှာ "Nox Player ကို" ဖြတ်လမ်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပထမဦးစွာ, Play Store ကိုသုံးစွဲဖို့သင့်ဂျီမေးလ်အကောင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ "Kika အီမိုဂျီနှင့် Keyboard ကို" App ကိုများအတွက် Play Store ကိုအိုင်ကွန်နှင့်ရှာဖွေရေးအပေါ်ကြောင်းကိုထိပုတ်ပါပြီးနောက်
ပထမဦးဆုံး link ကိုထိပုတ်ပါနှင့် app ကို install
ဒါကြောင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်က Nox ကစားသမားရဲ့ပင်မစာမျက်နှာပေါ်၌တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Kika ကီးဘုတ် + အီမိုဂျီ app ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့ပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ပါ။
တက်အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက ...
အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ရဲ့ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်နှင့်အတူ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို App ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သငျသညျတစ်နေရာရာမှာညပ်နေတယ်ဆိုရင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်အောင်အောက်ပါမှတ်ချက်ပေးရန်။
ပိုပြီးအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်, APK ကိုလမ်းညွှန်များနှင့်လဲ tutorial ဘို့ငါတို့ဘလော့ဂ်မှဝေမျှမယ်နှင့် subscribe ။
PC အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို Download လုပ်ပါ PC အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို Install PC အတွက် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို